Tartankan 'MacBook Air' oo wata nashqad cusub ayaa ku jeclaan doona adiga | Waxaan ka socdaa mac
Waa macquul in shirkadda Cupertino ay dhowaan cusbooneysiin doonto naqshadeynta MacBook Air. Uguyaraan wararka xanta ah waa waxa ay tilmaamayaan waxaana kahadleynaa suurtagalnimada mudo todobaad ah, inaan yeelano cusub oo loo yaqaan 'MacBook Air' oo leh naqshad la mid ah iMac-ka cusub soo bandhigay dhowr toddobaad ka hor.
Shaandhada caanka ah ee loo yaqaan 'Jon Prosser', ayaa miiska saareysa abaalmarin cusub oo aan ku arki karno naqshadda cusub ee loogu talagalay MacBook Air daadinta maalmahan. Micnaheedu maaha inay noqon doonto kooxda ugu dambeysa ee ka fog laakiin Bixintani waxay umuuqan kartaa wax badan sida shey ay sii daayeen Apple sanadkan haddii xantaasi run tahay.
Runtu waxay tahay in naqshadeynta MacBookgan Hawada ee ka socda Prosser ay aad u qurux badan tahay midabbo kala duwanna ay runti fiicnaan karto. Sida aad u jeeddo kiiboodhku waa cadaan, wax aan muddo dheer ka dhicin laptops-ka Apple.
Runtu waxay tahay in naqshaddu ay la mid tahay ta iMac-ka cusub oo waxaan dhihi karnaa inay tahay mid si guul leh loogu guuleystay geesaha laba jibbaaran oo la mid ah khadadka hadda ku jira qalabka Cupertino. Wax run ah kuma jiraan wararkaas xanta ah laakiin markaan eegno jumladdan waxaan runtii jeclaan lahayn inay ahaadaan. Waa qaab dhismeed aad u dhisan oo hubaal wuxuu jeclaan doonaa dad badan, in kastoo ay yiraahdaan: dhadhan ahaan, midabbo.
Waxaan si taxaddar leh ugu fiirsaneynaa dhaqdhaqaaqa Apple waxaan arki doonaa haddii ay ku dambeeyaan soo saarista MacBook Air cusub oo dhowaan la mid ah kii uu ku daabacay Prosser turjumaadan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » MacBook Air » Waxaad jeclaan doontaa bixintaan 'MacBook Air' oo leh naqshad cusub